सन्धिखर्क, अर्घाखाँची (अर्घाखाँचीडट्कम) । अर्घाखाँची जिल्लामा नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व चुन्न निर्वाचन जारी छ । महासंघको नेतृत्व चुन्न जिल्लामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।
नेतृत्व चयनका लागि महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था मिलाएको हो ।
विहान ९ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने मतदानका लागि कुनै आधिकारिक परिचय पत्र वा नागरिकता चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महासंघको आजको चुनावका लागि नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, प्रगतिशील पत्रकार संघ, प्रेश चौतारी, ( माधब समुह) जन पत्रकार संघ, प्रेश मंच नेपाल लगायतको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट २९ जनाको दरखास्त परेको छ । यस्तै एक्लै भिड्दै गरेको प्रेस चौतारी नेपालबाट २१ जनाको दरखास्त परेको छ ।
जिल्लामा महासंघको निर्वाचनमा १२६ जना मतदाताले मत खसाल्न पाउने छन् ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जित्दै
उता जिल्लाको प्रेस चौतारी बाहेक सबै पत्रकार संगठनको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले संयुक्त रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन् । जिल्लामा १२६ मतमा ११९ मत खस्ने अनुमान गरिएको छ । मतदाता नामावलीलाई हेर्दा अशोक खनालको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले निर्वाचन जित्ने अनुमान गरिएको छ । जिल्लामा संयुक्त प्यानल ८५, प्रेस चौतारी प्यानल ३४ मत ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।
तर हिजो गणेश खनालकाे प्यानलले पनि बहुमतले चुनाव जित्ने दावी गरेका थिए । प्यानलका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गणेश खनालले भने; "हामीले बहुमतले चुनाव जित्ने र संस्थागत विकासमा लागि पर्छाै ।"
महासंघको चुनावका लागि दरखास्त परेको नामावली यस प्रकार छ:-
रमेश बि.क .
प्रदेश परिषद सदस्य :-
प्रेश चौतारी ( के. पी. ओली )
महिला सदस्य करिष्मा खनाल
जनजाति सदस्य अमृत श्रेष्ठ
दलित सदस्य प्रदीप नेपाली
प्रदेश प्रदेश परिषद सदस्य :-